Amaphuzu ayishumi wokugcinwa kwemishini yokwenza insimbi engagqwali | Joyina
Ukugcinwa kwemishini yamapayipi ashiselwe engagqwali yokwenza imishini yokwenza ipayipi kubaluleke kakhulu. Ukugcinwa okufanele kungayelula kakhulu impilo yenkonzo yemishini yamapayipi ashiselwe, ithuthukise ukuphepha kwayo nokuzinza kwayo, futhi iqinisekise ikhwalithi yepayipi elishiselwe. Kodwa-ke, ama-welders amaningi abonile ukuthi imishini emikhulu efana nemishini yamapayipi wensimbi engagqwali izwa kakhulu futhi ayazi ukuthi izoyilondoloza kuphi. Amanye amakhasimende aze azwakalisa nethemba lokuthi i-JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., Onjiniyela be-LTD Imishini babanikeze umsebenzi wokulungisa nokulungisa njalo.
Umshini we-TISCO uzovakashela amakhasimende njalo, aqonde imishini esiyisebenzisa endaweni yekhasimende, asize amakhasimende ukwenza umsebenzi wokulungisa, axhumane nekhasimende ngobuchwepheshe bepayipi elibushiwe, imithetho yokulondolozwa kwemishini yamapayipi, njll., Okwaziwa kakhulu yi amakhasimende, kodwa ngemuva kwakho konke, ibhizinisi lezinsimbi zomshini wepayipi lensimbi engenasici futhi lukhulu futhi alikwazi ukuvakashelwa mathupha ngomsebenzi wokulungisa. Ngenxa yalokhu, onjiniyela beTISCO Machine babelane ngamanye amaphuzu abalulekile ekugcineni imishini yensimbi engagqwali yokusiza amakhasimende aqedele umsebenzi wokulungisa ngokuzimela.
Amaphuzu Ayishumi Ayisihluthulelo Okokulondolozwa Kwensimbi Yomshini Wensimbi Engagqwali:
1.Uhlaka olunezingqimba luyibhakela lezinsimbi ezihlangothini ezimbili. Lapho udinga ukufaka isimbali, khulula amabhawodi angaphandle okulungisa ubakaki. Khipha ubakaki wangaphandle bese ushintsha uhlangothi, olulula nolulula. Ukwehliswa kozimele kwenziwa ngokwehlukana nhlangothi zombili, futhi ukulungiswa kuguquguquka, kulula futhi kunemba okuphezulu.
2.Ukuma okuqondile kungalungiswa ngokuvundlile noma ngakunye kusisekelo. Ingaguqulwa futhi ibheke phezulu futhi kalula. Ama-rolling rolling amabombo agingqekayo.
3.Uhlaka lokulayisha lwamukela ukuguquguquka okufana nokuxhuma okuyi-cantilever double reel mechanism, okungalimala ngesikhathi senqubo yokusebenza kweyunithi. Lokhu kunganciphisa isikhathi sokulungiselela futhi kunike amandla idivayisi ukuthi ikhiqizwe ngokuqhubekayo ngaphandle kwenaliti egobile.
4.Ulayini ophakathi kwezingodo zokuqala ezimbili zokushisela umshini wokushisela u- +/- 45 ° engela kulayini wesikhungo esigingqikayo futhi ungalungiswa. I-weld iphucuziwe kusuka ezinkomba ezimbili ohlangothini olumile, maphakathi nalo okuyisikhungo soshisa. I-weld iqonde ngqo nge-engela engu-90 degree ukuya kugxuma oluphambili lokupholisha okungcono.
5.Ukucushwa kagesi kwensimbi engagqwali welding unit isebenzisa umthethonqubo wejubane lokuguqula imvamisa.
6.Usebenzisa ubuchwepheshe bokulawula imvamisa, isivinini siyazwela, bushelelezi, umsindo ophansi, nokusetshenziswa kwamandla okuphansi.
7.Umshini wokubumba nosayizi uqhutshwa yimoto eyodwa, ehlangene futhi elula ukuyigcina. Phakamisa, faka, futhi kube lula ukusebenza.
8.Sebenzisa ukuhlangana okuhlangene kwendawo yonke ukushintshanisa, vula inkinobho, impilo ende, ihlanzekile, yinhle, ayisindi.
9. Uhlaka oluvundlile luhlaka oluzungezayo olujikeleza ngasebhokisini lamagiya kanye ne-coupler. Kukhona u-gearbox ongu-4-speed (1 reverse gear) phakathi kuka-gearbox wesibungu nenjini, okwenza ukuthi i-unit ikulungele ukusebenza futhi nokugingqika kuzinzile.
10.Okokusetha kwepompo kawoyela komshini wokulinganisa wangaphakathi, yize kukhona isihlungi ngaphakathi, ikhasimende lisadinga ukwenza umsebenzi wokuhlanza njalo ukuqinisekisa ukuthi iphampu likawoyela ngeke livinjwe. Ukudlula komoya kwenzwa yomoya-mpilo kufanele futhi kuhlanzwe njalo ukuvimbela uwoyela oweqile. Kuvinjelwe ukugwema amasekethe amafushane.